Haweenay kaga adkaatay rag doorashada baarlamaanka ka socota Kismaayo | Gaaloos.com
Home » News » Haweenay kaga adkaatay rag doorashada baarlamaanka ka socota Kismaayo
Haweenay kaga adkaatay rag doorashada baarlamaanka ka socota Kismaayo
Xamsa Sheekh Xasan ayaa la tartantay labo murashax oo rag ah. 49 jirtaan horey u aheyd xildhibaanad ayaa si xoog leh uga adkaatay ninkii la tartmayay, iyadoo heshay codad gaaraya 36 cod guud ahaan 50-kii cod ee ergadu dhiibteen.
"Wuxuu ahaa nin iga xoolo badan waxaana taagerayay rag kale iyo waliba dad ka yimid qurbaha," Laakin waxan juhdi weyn galiyay la tashiga odeyaasheyda aniga markasta waxa dhageysta dadkeyga." ayay tiri Xamsa
Waxay sheegtay in sababta ay ugu biirtay Siyaasadda ay tahay iyadoo ka raja dhigtay xaalada fowdoe dalkeeda ka socdo.
Taxanaha 100-ka dumarka ah
Waa hooyo heysata sideed caruur agoon ah. "Dagaal kasta waxa uu aad u saameyaa haweenka si toos ah. Caruurtena iyo nimankeena ayaa ku dhinta dagaalka."
Dumarka ayaa door firfricoon ka qaadanaya doorashadan
" "Markii ugu horeysa oo aan bilaabay dhaqdhaqaageyga, ujeedkeygu wuxuu ahaa inaan xoojiyo haweenka ay saameysay dagaalada, saboolnimada iyo waliba cudurada."
Waxyna BBC-da y sheegtay in marka ay xildhibaan noqoto ay sii wadi doonoto dhaq-dhaqaaqaasi.
Title: Haweenay kaga adkaatay rag doorashada baarlamaanka ka socota Kismaayo